China Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ garlic clove Nlụpụta na Factory | Nongchuanggang
Okpokoro galik a kpọnwụrụ ngwa ngwa bụ otu n'ime ngwaahịa ndị dị omimi nke galik. Na galik dị ka isi akụrụngwa, mba ụwa ejirila ya mee ihe. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, imepụta ụdị galik a na-achọ akụrụngwa nyocha, ịmịkọrọ, peeling na usoro ndị ọzọ karịa 10.
Nnyocha ihe onwunwe: a chọrọ akụrụngwa na ọdịdị zuru oke, enweghị ire ure, enweghị mbibi, enweghị ọrịa ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ahụhụ, enweghị galik galik na ngwaahịa ndị ọzọ nwere nkwarụ ma ọ bụ adịghị ọcha.
Tetara: Sook dum garlic na mmiri dị ọcha maka ihe 15 ~ 30 nkeji ikwado ekpepụsị. Akụsị: Bee garlic ahụ e tinyere na galik na peeler garlic ozugbo. Nke abụọ ekpepụsị: maka ndị na-abụghị peel garlic galik si igwe ekpepụsị nhazi, cloves mkpa ka a aka pee pee iji hụ na garlic akpụkpọ ọcha.
Nhazi: A na-enyocha ma na-edozi galik cloves dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Nnyocha: nyocha ndị ọrụ nyocha, kpochapụ ọrịa na ahụhụ ahụhụ, agba ọjọọ, mmebi, ọnya akọrọ, ntụpọ rotton, na ngwaahịa na adịghị ọcha ndị ọzọ.
Disinfection: nnabata nke osikapa tozuru etozu na 100 mg / liter nke sodium hypochlorite ngwọta imikpu 15 nkeji, mezuo nje ndị na-akpata ọrịa iji gbuo nzube ahụ. Nhicha: itucha na mmiri pọmpụ wepụ sodium hypochlorite fọduru ngwọta. Akpịrị ịkpọ nkụ: wepu mmiri dị n’elu osikapa galik site na igwe ihicha ikuku.
Ọsọ na-ajụ: tinye osikapa tozuru etozu mgbe usoro ọgwụgwọ dị n'elu dị n'ime ụdị friza net. Ọnọdụ okpomọkụ na oge mmepụta dị n'okpuru -25℃, na ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti ngwaahịa a dị n'okpuru -18℃ mgbe ngwa-oyi.
Mbukota: Mbukota ga-rụrụ na a pụrụ iche dị ọcha na ịdị ọcha mbukota ụlọ, na ohere okpomọkụ a chọrọ na-achịkwa n'ime 0 ~ 10℃.
Nchọpụta igwe: ngwaahịa niile ga-agafere onye nchọpụta igwe, ndị ọrụ nyocha ụlọ ọrụ maka ịrụ ọrụ, na ndị na-ahụ maka njikwa njikwa iji rụọ ọrụ nyocha ọ bụla.
Refrigeration: a ga-etinye ngwaahịa ndị a na-akwakọba n'ime nchekwa n'oge. Iji hụ na ngwaahịa dị mma, ekwesịrị idobe ọnọdụ nchekwa na -20±2℃ na etiti okpomọkụ nke rụchara ngwaahịa n'okpuru -18℃.
Typedị nhazi Pee
Usoro oyi IQF
Udi Pụrụ iche Ọdịdị
Nkwakọ ngwaahịa Nnukwu
Ibu (n'arọ) 10
Aha ngwaahịa Oge ohuru nke garlic garlic oyi
Ihe onwunwe 100% Galik ọhụrụ
Ire Ahụkarị Ire
Nha 150-200 / 200-280 / 280-380pcs / n'arọ
Ndụ Shell 24 Ọnwa n'okpuru -18 ogo
Mbukota 10 N'arọ / CTN
MOQ 12 tọn
Okwu Ahịa FOB CIF CFR
Nke gara aga: Osisi ohuru ohuru
Osote: Ọhụrụ Galiki